हामीले सबैको कुरा सुन्ने र सबैलाई न्याय गर्ने हो - samayapost.com
हामीले सबैको कुरा सुन्ने र सबैलाई न्याय गर्ने हो
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको अन्तर्वार्ता
समयपोष्ट २०७७ भदौ १९ गते १२:४४
कोरोनाका कारण अन्य क्षेत्र जस्तै बैङ्किङ क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । यस्तो अवस्थामा बैङ्किङ क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने राष्ट्र बैङ्कको नीति के छ ?
कोभिड विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी भएकाले यसलाई नै रोकथाम गर्न सक्ने सामथ्र्य हामीसँग छैन । यो महामारीले गम्भीर असर र क्षति पुर्याएका अर्थतन्त्रका क्षेत्रलाई कसरी बचाउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य हुन्छ । बैङ्कबाट कर्जा लिएकालाई हामीले सम्बोधन गर्ने हो, बैङ्कबाट कर्जा नलिई व्यवसाय गर्नेको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ । त्यो राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ । बैङ्कबाट कर्जा लिएका ग्राहकले समयमा कर्जाको साँवा, ब्याज चुक्ता नगरेका कारण बैङ्कले घर जग्गा धितो लिलाम गर्छ । सङ्कटको समयले गर्दा बजारमा त्यसको राम्रो मूल्य आउँदैन । कम मूल्यमा सम्पत्ति जाने परिस्थिति नआओस् भनेर हामीले राहत दिन ऋण तिर्ने समय पर सार्ने, ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने, ऋणको पुनर्संरचना गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ । हामीले प्रभावका आधारमा अति प्रभावित, मध्यम र न्यून प्रभावित गरेर तीन किसिमले व्यवसायीलाई वर्गीकरण गरेका छौँ । त्यो वर्गीकरण गरे बमोजिम अति प्रभावितको २०७७ साल असार मसान्त सम्ममा तिनुपर्ने समय एक वर्ष, मध्यम प्रभावितलाई नौ महिना र कम प्रभावितलाई ६ महिनासम्म तिरेहुने भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ । एक वर्षमा पनि तिर्न नसक्ने विशेष अवस्था देखियो र बैङ्कले त्यो विश्वास गर्यो भने दुई वर्षसम्म पनि पर जान सकिने भनिएको छ ।
भोलिको अवस्था सामान्य भएर व्यवसाय हिजोकै अवस्थामा सञ्चालन हुन थाल्यो भने त्यतिबेला कर्जाको डिमान्ड ज्यादै धेरै हुन्छ । पहिले धेरै मानिस विदेश बस्दथे अब विदेश बस्नेमा ह्रास आउँछ । मलेसिया, जापान लगायतको अर्थतन्त्र इतिहासमै कमजोर अवस्थामा पुुगेको रिपोर्ट आइरहेको छ । त्यस्तो अवस्था आए हाम्रा कामदारलाई ती देशले नलिन सक्छन् । अहिले व्यवसायीले ब्याज तिर्नुपर्छ भनेर कर्जा लिइरहेका छैनन् । भोलि स्थिति सहज हुने बित्तिकै कर्जाको माग बढ्नसक्छ र त्यो बेला बजारमा तरलताको अभाव हुनसक्छ भनेर हामीले अहिले सहज ढङ्गले तरलता उपलब्ध गराउन केही पहल गरेका छौँ । त्यसमध्ये पुनर्कर्जा ल्याइएको छ । पुनर्कर्जा कोषमा राष्ट्र बैङ्कसँग अहिले ४२ अर्ब रुपियाँ छ । त्यो ४२ अर्बको ५ गुुणासम्म कोरोना सङ्क्रमण रहेसम्म लगानी गर्नसक्ने गरी कार्यक्रम बनाएका छौँ । राष्ट्र बैङ्कले बढी पैसा छापेर पनि अहिले मुुलुकमा उद्योग व्यवसाय र विभिन्न तह र तप्काका जनतालाई राहत दिनुपर्ने भएको हुनाले हामीले त्यो निर्धारण गरेका छौँ । त्यो भनेको २ सय १२ अर्ब बराबरको रकम हुन्छ । त्यसमा ७० प्रतिशत हामी बैङ्क वित्तीय संस्थालाई नै दिन्छौं । हामीले एउटा मापदण्ड बनाइदिएका छौँ । त्यो मापदण्डका आधारमा ऋणीलाई पहिचान गरेर उहाँहरूले पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुहुन्छ । पुनर्कर्जा एक वर्ष पाँच प्रतिशत सस्तो दरमा उहाँहरूले पाउनुहुन्छ ।
लघुवित्तलाई पहिलो पटक पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसमा हामीले दस प्रतिशत छुट्याएका छौँ । २१ अर्ब रुपियाँ लघुवित्त क्षेत्रमा जान्छ । त्यसले गर्दा कोषको लागत घटेर लघुवित्त क्षेत्रको ब्याजदर घट्न जान्छ । उहाँले त्यो पैसा ३ प्रतिशतमा पाउनुहुन्छ । हामीले २० अर्ब राष्ट्र बैङ्कमै राख्छौँ । बैङ्क वित्तीय संस्थाका कतिपय कार्यविधिभित्र नपरेका र बढी पैसा माग्नेलाई ५ करोडसम्म बैङ्कले दिनसक्छ भने त्योभन्दा बढी माग्नेको निवेदन राष्ट्र बैङ्कमा सीधा आउँछ । हामीले बढीमा २० करोड एउटालाई दिनेगरी पुनर्कर्जाको कार्यविधि सार्वजनिक गरेका छौँ । यसले भोलिका दिनमा स्थिति सहज हुँदा तरलताको स्थिति अलिकति सहज बनाउने काम गर्छ ।
गत वर्षदेखि हामीले ऋण पत्रलाई अलि बढी जोड दिएका छौँ । बैङ्कलाई ऋण पत्रमा लगानी गर्न भनेका छौँ । ऋण पत्रमा लगानी गरेको रकम भोलि आवश्यक परेको बेला तत्काल तरल गर्न सकिन्छ र राष्ट्र बैङ्कमा धितो राखेर बैङ्कले कर्जा प्राप्त गर्न सक्छन् । कोरोनाको बढी असर परेको बेला हामीले ब्याज तिर्न नसक्ने भयौँ, ब्याज घटाउनुपर्यो भन्ने अनुरोध आएको थियो । हामीले साउनदेखि तत्काल २ प्रतिशत ब्याज सबै बैङ्कको घटाएका छौँ ।
हिजोको दिनमा बैङ्कले बढी नाफा गरिरहेका थिए । अहिलेको अवस्थामा कम नाफामा चित्त बुझाउनुपर्छ । व्यवसायीको आम्दानी पनि कम हुन्छ, राजस्व घट्छ, कर्मचारीले पनि त्यहीँ अनुसार बोनस नपाउलान्, कतिपय ठाउँमा तलब नै घट्ला त्यो कुरामा पनि चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
अहिले बैङ्कको कर्पोरेट डिपोजिट ४५ प्रतिशत छ । कर्पोरेट डिपोजिटमा बैङ्कले प्रकाशित गरेको डिपोजिटमा १ प्रतिशत थपेर बिड गर्न पाउँथे । हामीले त्यो १ प्रतिशत थप्न पाउनुहुन्न भन्यौं। त्यो भनेपछि ४५ प्रतिशतको १ प्रतिशत ब्याज घट्यो । यसले गर्दा बैङ्कको ‘कस्ट अफ फन्ड’ घट्यो । त्यो घटेपछि बेस रेट घट्छ । बेस रेट घटेपछि ब्याजदर घट्छ ।
यसपालिको मौद्रिक नीतिबाट हामीले सेवा शुल्कमा क्याप लगाइदिएका छौँ । बैङ्कले दुुई, तीन, कतै चार प्रतिशतसम्म पनि सेवा शुल्क लिएका थिए । वाणिज्य बैङ्कको ०.७५ प्रतिशत, विकास बैङ्कको १ प्रतिशत, वित्त कम्पनीको १.२५ प्रतिशत, लघुवित्तको १.५ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाइन्छ भनेर व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसले गर्दा यी सबै कुराबाट ब्याजदर घटेको अवस्था छ । त्यसका साथसाथै एसएमई क्षेत्रमा १५ प्रतिशत, कृषिमा १५ प्रतिशत कर्जा लगानी हुनुपर्ने, रियल स्टेट लगायत क्षेत्रमा कर्जाको लिमिट तोकिदिएका छौँ । जसले गर्दा हरेक क्षेत्रमा कर्जा जान सकोस् । ब्याजदर घटाउन स्प्रेडलाई कडाइका साथ लागू गरेका छौँ । जसले गर्दा ब्याजदर घट्ने अवस्था रहेको छ ।
सरकारले दिनुपर्ने राहत बैङ्कले जनताबाट उठाएको पैसा दिँदा यसले वित्तीय स्थायित्वमा असर गर्दैन ?
केन्द्रीय बैङ्क भनेको नियमन गर्ने संस्था हो । हामीले सबैको कुरा सुन्ने र सबैलाई न्याय गर्ने हो । त्यसकारण हामी बैङ्कको पनि सेवा शुल्क अथवा ब्याजदर घटाउँछौं । स्प्रेडमा कडाइ गर्छौं । बैङ्क ज्यादै धेरै मुनाफाखोरी हुनुहुदैन भनेर नियमनमा राख्न खोजिएको हो । यसको मतलव बैङ्कलाई नाफै गर्न नदिने, चल्नै नदिने, बैङ्कलाई घाँटामा जानेगरी कस्ने भन्ने होइन । हाम्रा सबै स्टेक होल्डरको विन विनको स्थिति होस् । सबैलाई हामीले न्याय गरौँ भन्ने हो । लाखौँ डिपोजिटरको पैसा भेला गरेर बैङ्क चलेको हुन्छ । त्यसकारण डिपोजिटमा मुद्रास्फीति बराबर ब्याज पाइयोस् । जस्तो अहिले हामीले सात प्रतिशत मुद्रास्फीति टार्गेट गरिरहेका छौँ । सात प्रतिशतको मुद्रास्फीति हुने हो भने बचतकर्ताले पनि सात प्रतिशत पाउनुपर्यो । नभए आफ्नो व्यवहार धान्न उसलाई गाह्रो हुन्छ । सात प्रतिशतको डिपोजिट गर्न बचतमा चार/पाँच प्रतिशत होला, मुद्दतीमा आठ/नौ प्रतिशत होला । अनि सात प्रतिशतको एभरेजमा डिपोजिटरको एउटा इन्डिकेटर देखाउला । त्यस्तै हामीले ४.४ प्रतिशत बैङ्कको स्प्रेड भनेका छौँ । सात प्रतिशतमा ४.४ भनेको ११.४ प्रतिशत कर्जाको ब्याज हुनेभयो । ११ प्रतिशत कर्जाको औसत ब्याजदर हुनका लागि व्यापारिक कर्जा १२/१३ प्रतिशतमा जालान् । कतिपय कृषि, एसएमईमा, उद्योग धन्दा, हाइड्रोमा गर्ने ब्याज आठ, नौ प्रतिशत होला । त्यसरी आठ, नौ प्रतिशतदेखि १२/१३ प्रतिशतको बीचमा हुँदा ११, साढे ११ प्रतिशतको बीचमा औसत ब्याजदर कायम होला । त्यो भयो भने कर्जा प्राप्त गर्नेले, डिपोजिटरले पनि न्यायपूर्ण रेट पाउँछन् । बैङ्कले पनि मुनासिव आम्दानी गर्न पाउँछन् । बैङ्कले मुनासिव आम्दानी गरेपछि उनका लगानीकर्ता सेयर होल्डर, कर्मचारीले पनि मुनासिव रिटर्न पाउँछन् भन्ने हाम्रो आशय हो ।
बैङ्कलाई नाफै गर्न नदिने, चल्नै नदिने, बैङ्कलाई घाँटामा जानेगरी कस्ने भन्ने होइन । हाम्रा सबै स्टेक होल्डरको विन विनको स्थिति होस् ।
हामी कसैको स्वात्तै बढाउने कसैको स्वात्तै घटाउने गर्दैनौँ । हामी वित्तीय स्थायित्व चाहन्छौं । वित्तीय स्थायित्वका लागि सबै वर्गलाई समान ढङ्गले लाभ प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले अर्थतन्त्र तहसनहस भएर प्रताडित भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पाउनुपर्ने सुविधा पनि सबैलाई दिनुपर्छ र क्षतिको जिम्मेवारी पनि सबैले लिनुपर्छ । त्यसकारण हिजोको दिनमा बैङ्कले बढी नाफा गरिरहेका थिए । अहिलेको अवस्थामा कम नाफामा चित्त बुझाउनुपर्छ । व्यवसायीको आम्दानी पनि कम हुन्छ, राजस्व घट्छ, कर्मचारीले पनि त्यहीँ अनुसार बोनस नपाउलान्, कतिपय ठाउँमा तलब नै घट्ला त्यो कुरामा पनि चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
बैङ्कले गर्न सक्ने भनेको केही समय पर्खिदिने हो । केही ब्याजदर, सेवा शुल्क घटाइदिने र अलि पछि कमाएर तिर भन्ने हो । कमाउनै नसक्ने, तिर्नै नसक्ने हो भने जोखिम छ भनेर सबैले घर, जग्गा धितो राखेका हुन्छन् । बैङ्कले लिलाम गर्छ र असुलउपर गर्छ ।
कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधा दिँदा भोलि कतिपय व्यवसाय कोल्याप्स भए भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ?
त्यसमा जसलाई जे मन लाग्यो आँखा चिम्लिएर गर्दै जाने होइन । त्यहाँ सबै कुराको विष्लेषण गरेर मापदण्ड तोकिएको छ । हामीले पुनर्कर्जा दिँदा गत वर्ष २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गरेको छ भने नदिन भनेका छौँ । किनभने कसैले डेढ सय प्रतिशत नाफा गरेको छ उसलाई लाभांश बाड्न पैसा दिनुपर्ने जरुरी छैन । कोही घाटामा छ, कसैले दस, कसैले १५ प्रतिशत मात्र नाफा गर्यो , प्राण धान्न गाह्रो पर्यो भने मात्र सहयोग गर्ने हो । बैङ्कले ती सबै कुराको विश्लेषण गर्छ । केही गरी चल्नै नसक्ने अवस्था छ भने बैङ्कले डिपोजिटरको पैसा लिएको भएकाले त्यो पैसा माया मारेर अनुदान दिन सक्दैन । बैङ्कले गर्न सक्ने भनेको केही समय पर्खिदिने हो । केही ब्याजदर, सेवा शुल्क घटाइदिने र अलि पछि कमाएर तिर भन्ने हो । कमाउनै नसक्ने, तिर्नै नसक्ने हो भने जोखिम छ भनेर सबैले घर, जग्गा धितो राखेका हुन्छन् । बैङ्कले लिलाम गर्छ र असुलउपर गर्छ ।
राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको सहुलियत कर्जा कार्यक्रममा निजी बैङ्कले खासै चासो देखाएको पाइएन । यसमा केही कमी कमजोरी छन् कि ?
यसबारे ग्रासरुटका नागरिकलाई ज्ञान छैन । गाउँगाउँका मानिसमा उद्यमी हुने संस्कारको विकास भइसकेको छैन । दुई महिना खेतीपाती गर्ने त्यही खाने अनि अर्ध बेरोजगार भएर बस्ने परम्परामा धेरै मानिस छन् । ती कुरामा आमूल परिवर्तन हुन जरुरी छ । मानिसमा उद्यम गर्ने आदतसमेत बसाल्नुपर्ने छ । वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने पनि आवश्यकता छ । गतवर्ष बैङ्क पनि त्यति आकर्षित नभएको अवस्था हो । सुरु सुरुमा सहुुलियत कर्जा ल्याउँदा कम ब्याजदरमा दिनुपर्छ, धितो नहुने भएपछि उठाउन गाह्रो हुन्छ भनेर बैङ्कले उत्साह नदेखाएकै हुन् । त्यहीँ भएर हामीले पुनर्कर्जा कार्यविधि संशोधन गरेका छौँ । कम्तीमा एक आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैङ्कले पाँच सय ऋणीलाई ऋण दिएकै हुनुुपर्छ । न्यूनतम एउटा शाखाबाट १० जनालाई दिएकै हुनुुपर्छ भनेका छौँ । यसलाई राष्ट्रिय स्तरका विकास बैङ्कले पनि तीन सय वटालाई लगानी गर्नुपर्छ । न्यूनतम पाँच वटा एउटा शाखाबाट गर्नुपर्छ । त्यस्तै वित्त कम्पनीलाई पनि हामीले तोकिदिएका छौँ । देशभरका सबै शाखाबाट अब यो जान्छ ।
गाउँगाउँका मानिसमा उद्यमी हुने संस्कारको विकास भइसकेको छैन । दुई महिना खेतीपाती गर्ने त्यही खाने अनि अर्ध बेरोजगार भएर बस्ने परम्परामा धेरै मानिस छन् । ती कुरामा आमूल परिवर्तन हुन जरुरी छ । मानिसमा उद्यम गर्ने आदतसमेत बसाल्नुपर्ने छ । वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने पनि आवश्यकता छ ।
पोहोरसम्म बेस रेटमा २ प्रतिशत थपेर दिनुुहोस् भनेका थियौँ । वाणिज्य बैङ्कको बेस रेट साढे ५ प्रतिशत, सिभिल बैङ्कको बेस रेट ११ प्रतिशत । जसले पनि २ प्रतिशत थप्न पायो । सिभिल बैङ्कमा जाने मान्छेले २ प्रतिशत थपेर १३ प्रतिशत ब्याज लिन्छ । वाणिज्य बैङ्कमा जानेले सात प्रतिशत, राज्यले पाँच प्रतिशत तिरिदिन्छ । त्यसो भएपछि वाणिज्य बैङ्कबाट लिनेले २ प्रतिशतमा पाउने भयो । सिभिल बैङ्कबाट लिनेले ८ प्रतिशत तिर्नुपर्ने भयो । त्यसो हुँदा त्यो अलि न्यायोचित भएन । बढी बेस रेट भएको बैङ्कमा जान्ने मान्छे जाने नै भएनन् । यो वर्ष बजेट वक्तव्यमा सहुलियत कर्जा ५ प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने भनेर किटानी भएर आयो । अब जुनसुकै बैङ्कले ५ प्रतिशतमा दिने भए । ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज बैङ्कले चार्ज गर्छ । त्यो चार्ज गरेको सरकारसँग लिन्छ । सरकारले ५ प्रतिशत तिरिदिन्छ । क्लाइन्टले जुनसुकै बैङ्कमा गएर ५ प्रतिशत मात्र तिरेर यो कर्जा लिन पाउने भएको हुनाले यो वर्षदेखि व्यापक रूपमा यो कर्जा विस्तार हुन्छ ।
म इमानदार छु अहिले सक्दिन भोलि तिर्न सक्ने बेलासम्मलाई सारिदेऊ भन्ने ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ । व्यापारी, व्यवसायी, आम नागरिकका समस्यालाई बैङ्क वित्तीय संस्थाले अड्कल मात्र गर्नुहुँदैन । व्यापारी–व्यवसायी थिए र त हिजो बैङ्क चले । भोलिका लागि बैङ्क चल्न पनि चाहिने उनीहरू नै हुन् ।
अन्त्यमा केही छ कि ?
यो कठिन परिस्थितिमा ज्यान जोगाउन सकियो भने भोलिका दिनमा कमाउने थुप्रै अवसर हुन्छन् । व्यापारीले बैङ्कलाई, बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कलाई धारे हात लगाउने बेला यो होइन । हामीमा उद्यमशीलताको विकास हुनुपर्यो। म इमानदार छु अहिले सक्दिन भोलि तिर्न सक्ने बेलासम्मलाई सारिदेऊ भन्ने ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ । व्यापारी, व्यवसायी, आम नागरिकका समस्यालाई बैङ्क वित्तीय संस्थाले अड्कल मात्र गर्नुहुँदैन । व्यापारी–व्यवसायी थिए र त हिजो बैङ्क चले । भोलिका लागि बैङ्क चल्न पनि चाहिने उनीहरू नै हुन् । त्यसकारण बैङ्कले व्यापारी–व्यवसायीलाई काँध थापेर कम नाफामा चित्त बुझाउन जरुरी छ ।
आम नागरिकले पैसा खल्तीमा बोक्ने, बिटाबिटा लगेर घरमा राख्ने, जे कामका लागि पनि खल्तीबाट पैसा निकाल्ने प्रवृत्तिमा आमूल परिवर्तन हुन जरुरी छ । अब हामी डिजिटल इकोनोमीमा जानुपर्छ । यसमा हामी धेरै अगाडि बढिसकेका पनि छौँ । बैङ्क वित्तीय संस्थाले डिजिटल कार्यक्रमबाट लिने शुल्क घटाएको अवस्था छ । हामीले राष्ट्र बैङ्कबाट आरटीजीएस लागू गरेका छौँ । त्यो हामीले निःशुल्क गरेका छौँ । यो कोभिडको समयमा एउटा बैङ्कको एटीएम अर्कोमा चलाउँदा चार्ज नलिन निर्देशन गरेका छौं । एटीएम, इन्टरनेट बैङ्किङ, मोबाइल बैङ्किङ, वालेट बैङ्किङको प्रयोग गर्ने, मोबाइल टु मोबाइल पैसा ट्रान्सफर गर्ने जस्ता प्रविधि प्रयोग गर्न सिक्न अब जरुरी छ । नयाँ प्रविधिमा हरेक सङ्घ संस्था, बैङ्क वित्तीय संस्था, सरकारले लगानी बढाउने र कर्मचारीलाई राम्ररी ट्रेन गर्न जरुरी छ । सबै नागरिक डिजिटल ट्रान्जेक्सनमा सचेत हुन जरुरी छ । पैसाको बढी प्रयोग गरेनौ भने पैसा छाप्ने कष्टमा हामीले धेरै बचत गर्न सक्छौँ ।
एनआईसी एशियाको चेक जम्मा गर्न अब अनलाइनबाटै भौचर भर्न सकिने सुविधा
नेपालमै पहिलो पटक नबिल बैंकले सुरु गर्यो फोनबाट लोन लिने सुविधा
वीरेन्द्रनगरमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २४१ औं शाखा सञ्चालनमा
वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकले दियो २३ अर्ब ६० करोड ऋण
एनआइसी एशियाको सुपर चमत्कारिक कर्जाहरूको आवेदन खल्ती डिजिटल वालेटमार्फत दिन सकिने
ग्लोबल आइएमई बैंकको गोरथली र ज्यामिरगढीमा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा